संगठित सुन तस्करी: पर्दापछाडि को–को ? यस्ताे छ थप रहस्य! -
संगठित सुन तस्करी: पर्दापछाडि को–को ? यस्ताे छ थप रहस्य!
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०७:३८ 465 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । संगठित सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्तका रूपमा प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा रहेका ‘गोरे’ भनिने चूडामणि उप्रेती पक्राउ परेका छन् । उनी काठमाडौंको गौरीघाटस्थित आफ्नै घरनजिकबाट मंगलबार बिहान साढे पाँच बजेतिर पक्राउ परेका हुन् ।
राजधानीमा पक्राउ गरी हवाई मार्ग हुँदै विराटनगर ल्याइएका उनलाई कार्यालय समय सकिन लाग्दा कडा सुरक्षाका साथ अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । आदेश सुन्न भेला भएका अभियुक्तका आफन्तलगायतको बाक्लो उपस्थिति रहेको अदालत परिसरमा मृतक सनम शाक्यका आफन्तले गोरेलाई कडा कारबाही माग गर्दै नारा लगाएका थिए । त्यसपछि अदालतमा थप सुरक्षाकर्मी ल्याइएको थियो । विराटनगर विमानस्थलबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएर राखिएका उनलाई अदालत ल्याउँदा र फर्काउँदा कडा सुरक्षा दिइएको थियो । गोरे पक्राउ परेपछि अब ३२ जना अझै फरारको सूचीमा छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट